dimanche, 01 décembre 2019 23:01
Depiote Leva: Efa tsy any am-ponja, manao asa ivelany…
Manao asa ivelan’ny fonja « Main d’ouvre pénale » ary efa tsy ao am-ponja intsony. Izay no vaovao farany momba an-dRaveloson Ludovic Adrien dit Leva Sydney, izay nidoboka am-ponja teto Morondava ny 24 aprily 2019, nefa voafidy ho solombavambahoakan’i Mahabo, Faritra Menabe tamin’ny fifidianana natao ny 27 mey 2019.
dimanche, 01 décembre 2019 18:47
Résultat provisoire CENI, Conseillers Antananarivo Renivohitra.
Vokatra vonjimaika CENI, Mpanolotsaiana Antananarivo Renivohitra.
dimanche, 01 décembre 2019 18:22
Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana 2020: Nolanian’ireo solombavam-bahoaka
Nolanian’ny solombavam-bahoaka nivory tao amin’ny Lapan’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza harivan’ny sabotsy 30 novambra 2019 ny Volavolan-dalàna laharana faha-005/2019 tamin’ny 30 oktobra 2019 momba ny Lalàna mifehy ny Fitantanam-bolam-panjakana ho amin’ny taona 2020.
Vinavinaina ho 5,5% ny fitombon’ny harin-karena, ary 6,2% ny fisondrotry ny vidim-piainana amin’ny taona 2020.
Vinavinaina ho 11,5%, ny taham-pampidiran-ketra.
Miisa 11 ireo kandida Ben’ny tanàna nifaninana tato amin’ny Kaominina Vinaninkarena, Distrikan’Antsirabe II, Faritra Vakinankaratra. Anisany ny Ben’ny tanàna farany, izay nirotsaka amin’ny anaran’ny tsy miankina.
Tsy nanomboka akory ny fampielezan-kevitra dia voatazona am-ponja vonjimaika ity kandida ity, noho ny raharaha nahavoarohirohy azy ara-pitsarana. Izy no mitarika vonjimaika amin’ny voka-pifidianana tao amin’ity Kaominina Vinaninkarena amin’ny voka-pifidianana notanterahina ny alarobia 27 novambra 2019 teo.
dimanche, 01 décembre 2019 14:37
Rugby-Amboaran’i Afrika: Madagasikara # Nizeria
Hihaona etsy amin’ny Kianja Monisipaly Mahamasina izao tolakandro izao ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny Rugby na Makis de Madagascar sy ny Black Stallions Nizeriana. Lalao tafiditra amin’ny fifanintsanana amin’ny fiadiana ny Amboaran’i Afrika izy ity.
dimanche, 01 décembre 2019 14:36
Lisi-pifidianana: Manomboka misokatra ho an'ny olompirenena isam-pokontany
Isan-taona, ny 1 desambra hatramin'ny 15 mey no fotoana voatondron'ny lalàna hanavaozana ny lisi-pifidianana. Androany 1 desambra no manomboka misokatra ho an'ny olompirenena ny lisi-pifidianana isam-pokontany.
Ny 1 desambra 2019 hatramin'ny 15 febroary 2020 no fepotoana ahazoana misoratra anarana ao anaty lisi-pifidianana eny anivon'ny Fokontany.
Amin’ny 28 febroary 2020, ny famaranana vonjimaika ny lisi-pifidianana. Aorian'izay dia miakatra eny amin'ny "Centre informatique de District" (CID) ireo boky firaketana ny fanavaozana isam-pokontany, arakitra ara-kajimirindra, ary atonta vonjimaika ny lisi-pifidianana.
dimanche, 01 décembre 2019 13:36